Khuphela i-MIUI Jelly Bean rom ye-Samsung Galaxy S | I-Androidsis
Inguqulelo entsha 2.9.17 ikhutshiwe nje, yiza apha kwaye ubukele ividiyo yeedemo yothando olwenziwe ndimokanye, inezinto ezininzi eziphuculweyo ezibalulekileyo kunye nokusetyenziswa okutsha.
Molweni kwakhona kubahlobo be-Androidsis, kule post intsha, kwaye ngenxa yempumelelo enkulu, ndiza kunibonisa ingxelo entsha yenye yeerom Ijelly Bean ye-Android 4.1.1 kwi Samsung Galaxy S.
I-rom ayikho enye ngaphandle kukaMuchopoli83 entsha 2.8.24 version, ithathwe ngqo kwi-Miui rom esemthethweni ye Samsung Galaxy Nexus, I-deodexed kwaye ilungiselelwe ukuya kuthi ga kwisiphelo sethu seSamsung, ethi ngaphandle kwezinye, isenedabi elininzi ekufuneka ililwe.
Enye yeenoveli eziphambili zolu hlobo lutsha kukubandakanywa kwesixhobo se Uhlaziyo lukaYaos, Isicelo esiza kusinceda sihlaziye i-rom yethu nge-OTA ukusuka kwisiphelo sethu ngaphandle kwesidingo sekhompyuter yakho.
Ukongeza, ukhetho lwe Qalisa kwakhona kwiNdlela yokubuyisela kunye nokukhuphela kwimenyu ephambili yefowuni.
Ngoku, uphendula umbuzo Iinkalo, Umsebenzisi wale bhlogi ondibuza ukuba kuyacetyiswa na ukuba uhlaziye le nguqulo intsha, ndiyamxelela Akucebisi,kodwa kungcono kubalulekile okoko umsebenzi wonjiniyela ngokudibeneyo kunye @elitemovil yeyona nto ndiyifumene kumnatha ngokweenguqulelo zeembotyi zeJelly Samsung Galaxy S, Kungenxa yoko le nto ndigqibe kwelokuba ndilandele kwaye ndipapashe iinguqulelo ezintsha eziphuma kule rom evusa inkanuko.
Kwabo sele bevela kwi-rom ye UMiui Muchopoli83 2.8.17, kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Khuphela ifayile ye-rom, kunye Uhlaziyo lukaYaos kwaye ubeke iifayile ezimbini ungatyiswanga kwi sdcard yesixhobo.
Ukuze singalahlekani nedatha yethu kunye nokusetyenziswa, siya kuvula usetyenziso yeSistim yothando lwethu kwaye siza kwenza yokugcina ngayo yonke into enomdla kuthi, ngale ndlela, yakuba ifakiwe inguqulelo entsha siya kuba nakho ukubuyisa ii -apps zethu kunye nedatha ngendlela elula, kwanomxholo wegraphic esinawo ngalo mzuzu.
Siza kucima i-terminal kwaye siyiqale kwakhona kwiNdlela yokuBuyisa.
Ngoku njengamaxesha onke, kuyacetyiswa, nje ukuba i-terminal iqale kwakhona, mayiphumle okungenani imizuzu emihlanu, emva kwelo xesha siya kuba nakho ukuvula ifayile indawo yokugcina eluncedo Ukufumana kwakhona idatha kunye nokusetyenziswa kwethu.
Ukufaka Umbuyekezi we-Yaos, Siza kuyenza kwiNgxelo yoBuyiselo kukhetho Faka i-zip kwi-sdcard akukho sidingo sokwenza nayiphi na into yokusula.
Ngelo xesha ukulungiswa akukathathwa ukuyibeka kwi-240 dpi, Kwaye kufuneka sikhumbule ukuba ukulungiswa kwangaphambili akusincedi kuba kungohlobo lwe-2.8.17, ukusuka kwisicelo uqobo Uhlaziyo lukaYaos Kuya kufuneka sikwazi ukukhuphela zonke izinto eziza kuphuma kule rom, izinto ezifana neemodem ezihambelanayo, i-dpi, kwaye kunjalo, uhlaziyo kwiinguqulelo eziphezulu.
Yongeze i-DPI kwi-240 eguqulweyo ndim y ilungiselelwe le nguqulo intsha, uyazi, ifakwe kwi-Recovery ngaphandle kwemfuneko yokusula.
Kulabo bafuna ukufaka le rom okokuqala, kufuneka ulandele amanyathelo kwesi sifundol kodwa nge iifayile zale post.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S, i-Rom MIUI Jelly Bean 2.8.17 ngu-muchopoli83
Khuphela - Ukuhlaziya iRom kunye neYaos, lungisa i-dpi ukuya kuma-240 elungiswe ndim
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S, i-Rom MIUI Jelly Bean 2.8.24 ngu-muchopoli83
Xa uzama ukukhuphela iifayile ithi zisusiwe ...
Ndizikhuphele izolo kwaye zihambe kakuhle
Molo kwakhona, umbuzo okhawulezayo, le ROM imnandi yintoni enenzuzo ngaphezulu kwe-Android 4.1.1 RC10 ROM evela ku- @elitemovil? Kungenxa yokufuna ukwazi, ngaphandle kohlaziyo nge-OTA olwaneleyo kodwa luphume kumnqweno. Ngaba inesicelo seRadio kuyo? Ngaba ibhetri ihlala ixesha elide?
Chwayita kwaye ndiyabulela kwakhona
UJulio Alvarado V. sitsho
Iyakhawuleza, izinzile, izibuko lesiseko yi-rc 11 ye @ELITEMOVIL ke ukuba sele uyizamile, ungacinga ukuba injani, ndivavanya iirom ezikumthala wam, kwaye ndiyakuxelela ukuba ndikhetha le rom kwi-rc11, kum Kubonakala kuzinze ngakumbi, ngaphandle kokuba ndiphulukene nomxholo weembotyi wejeli, ndiyifaka i-apex kwaye yiyo loo nto, ihamba kakuhle, ngokungafaniyo nokuba uyifakile i-rc11 kwaye wayifaka i-MIUIHOME, ibonisa ukungaphumeleli.
Phendula kuJulio Alvarado V.
Abo bangayifumananga, kukho enye ikopi efakwe kwi-4shared ngelixa i-akhawunti ye-muchopoli83 ilungiswa:
Ndiyathemba ukuba iyakusebenzela.
Ewe ngoku umbuzo wam ...
Ngokunyanisekileyo ndingathanda ukuhlaziya iselfowuni kule nguqulo.
Sele ndiyivusile kube kanye kwi-gingerbread enye kodwa andikhumbuli nokuba kanjani, ndicinga nge-odin, kwaye bendineengxaki eziliwaka de ndazifumana ...
Ke, elinye lamathandabuzo kukuba, ngaba i-titanium backup ikuvumela ukuba ugcine yonke idatha kwindawo yogcino (iifoto, umculo, ii -apps ... zombini ezisuka kwiselfowuni kunye ne-sd? akandazi ...
Okwesibini: Ngaba kuya kufuneka wenze ufakelo olucocekileyo, nokuba kucebiseka kangakanani? Kuba ndiyabona ukuba ufakelo olucocekileyo "luyanyanzela" ukufomatha zonke izahlulelo okanye iifolda zeselfowuni ... kubandakanya ne-SDCARD kwaye ukuba ndinazo iifayile apho, ndizifaka njani kamva =
Kwaye andikhumbuli umbuzo wokugqibela, kodwa ndingawushwankathela ...
Ngomlinganiselo wamathandabuzo endinawo, uyandicebisa ukuba ndizame ????
Iñigo, ukuba ungathanda ukuyihlaziya… qhubeka. Eyona nto inkulu kukugcina (kugcinwa kwi-PC ngaphambi kokufomatha ^ ^) ... Njengoko kucetyisiwe, ukulandela izifundo kwiforum ngendlela yokufaka ngokucocekileyo kwaye ufake iJVU Gingerbread + CF-ingcambu kunye nokubuyisela ... Akukho nto yokoyika, nangona ihlala isoyikisa ekuqaleni, kodwa ayikho enye. Emva koku, kuxa ukopa iROM kwaye uyikhanyise.
Ewe, sendivele ndiqala kwi-rom yeGigerbread kwaye ndineCF-Root kunye nokubuyela kwakhona (kwakhona ukusuka kuMphathi weRom kundivumela ukuba ndiye ngqo kuyo).
Inqaku yile, ndenza njani ukhuphelo kwi-PC? Okanye kufuneka ndigcine kwi-PC ukuyibuyisela kamva?
Luloyiko lokuphulukana nedatha, anditsho ukuba ukudanyaza kuzokuhamba gwenxa ... kodwa idatha evela kwi-SD ayikho enye into ngaphandle kokuyisusa kwaye yiyo loo nto, kodwa ezo zisuka kwiselfowuni zona andizenzi ' Andazi ukuba ndingazisindisa njani, kwaye andikhumbuli ukuba ndenze njani nge-ODin ngelinye ixesha, okanye ukuba ndikwazile ukubasindisa ..: S
I-Titanium igcina usetyenziso kunye nedatha yazo (umzekelo useto lomdlalo okanye amanqaku), kodwa hayi iifayile zakho (iifoto, umculo).
Nangona ukubuyiselwa akuzange kundisebenzele kodwa hey.
Into ekufuneka uyenzile:
1) ukuba i-titanium yenza ugcino lwazo zonke iiapps (kunye nedatha yazo) ngaphandle kweenkqubo (ezinje ngeMaphu zikaGoogle) kuba uya kuzifaka kwakhona kamva ngohlaziyo lwabo.
2) ukuba ezi backups zigcinwa kwi-SD yakho yangaphandle, kunye neefayile zakho.
3) susa i-SD yangaphandle.
4) fomatha yonke into oyifunayo, idatha yakho ikhuselekile etafileni
5) Faka i-SD, faka i-titanium kwaye ufumane kwakhona.
Sele ndicinge ukuba idatha enjengeefoto, umculo ... njl njl. Ezazingekho kwimemori khadi ziya kucinywa: (...
Kwaye kwenzeka njani ukuba iTitanium ingabuyiseli usetyenziso kuwe?
Ukuqala kwam ukuyisebenzisa, kuye kwafuneka ndibabuyisele nganye nganye, emva koko ndibeke ipremiyamu kwaye iyenza ngaxeshanye ...: S
Ukuba, ifolda enezincedisi endinazo (ndicinga) kwimemori yefowuni…. Ndicinga ukuba ukuyidlulisa kwi-pc okanye kwi-SD akunakwanela? kwaye emva koko uyibuyisele apho ibikhona ...: S
Ngaba le yeyona ROM ibalaseleyo ye-I-9000 nge-4.1 ukuza kuthi ga ngoku?
Okanye isekhona https://www.androidsis.com/team-android-jelly-bean-samsung-galaxy-s/?
Ukucinezela iqhosha lokuvala akufumani ndlela yokuqalisa kwakhona kwiNdlela yokubuyisela kunye nokukhuphela
Kwaye i-Yaos Updater sele ndiyifakile ekubuyiseleni kodwa ngoku andifumani ndawo kwaye kwithiyori ufakelo lugqityiwe.
Enkosi kakhulu ngayo yonke into nangokwenza lula
Phendula ku Davidgr
Uxolo ngesiHlaziyi seYaos ukuba siyasebenza, okwenzekileyo andifumananga
Enye into eyenzekayo kum kukuba xa ndihlawulisa iselfowuni ngelixa ivuliwe, ibhetri iyaphuma kwaye ihlale ijinga kuba ayihambisi phambili imibala kwaye ayibonisi xa ikwi-100%
Uxolo, iselfowuni icinyiwe kwaye iyabiza
Molo ... ndiyifakile kwaye izakulunga ... kodwa ndilahlekelwe yi-imei, ndiyifumana njani?
Sihlobo, le rom isebenza kakuhle kum, ndivela eVenezuela, kodwa i-Umts okanye i-3G isebenza ngedigital Venezuela, ingaba ikhona indlela yokutshintsha i-baseband…?
Molo, sendivele ndadanyaza ndilandela yonke imiyalelo yakho kwaye ndenza ufakelo olucocekileyo. Ndimele nditsho ukuba ndinemicimbi eyi-0 kwaye isebenza kakuhle. Ingxaki kuphela kukuba andiqhelani nonxibelelwano. Ndizama ukubuyisa usetyenziso lwam ngeTitanium Backup, kodwa iyandixelela ukuba ifuna imvume yeNgcambu kwaye andiyifumani indawo yokuyinika ... andazi ukuba ndingena njani kwimenyu ephambili apho usetyenziso olufakelweyo zikhona, njl. Ungandinceda? Enkosi!
Ngo-22/09/12 15:43 PM, uDisqus wabhala:
Emva kwethutyana ujonge kwaye ujikeleza, sele ndikwazile ukubuyisa iiapps zam ngeTitanium Backup. Ukusuka kwinto endiyibonayo le nguqulo ye-Android isusile imenyu yodidi kunye nokusetyenziswa okufakwe kwii "desktops." Okwangoku ndinemibuzo:
1) Ngaba le Jelly Bean ROM ibandakanya inkqubo yokuyalela kwelizwi ukuba le nguqulo ye-Android iyaqhayisa? Unokulufikelela njani?
2) Ngaba ikhona indlela yokufaka ikhibhodi ye-swype? Ndandisele ndimqhelile eGingerbread kwaye ngoku ndiyamkhumbula ...
3) Oko ukuhlela ubungakanani bewijethi ukuze uzibeke kubungakanani obufunayo, andiboni ukuba ungayenza njani ...
Okwangoku ndinyanzelisa: iROM elungileyo kakhulu. Enkosi ngesifundo kunye neenkcazo! 🙂
Umabonwakude wam akaqali ndine-samsung captivate, yiya nje kwi-donwload kunye nokubuyisa, ndiyiqala njani, nceda
I-Omega StatusBar, ibha yomsebenzi ehambelana neemfuno zakho